Amin'ny fiaraha-monina dia mora kokoa ny mizara noho ny manambatra - samy mahita azy na amin'ny firenentsika na any ivelany. Ary ny resaka fifandirana dia tsy tokony ho soatoavina ambony kokoa, hajan'ny fianakaviana ary zavatra toy izany, "kilasika". Mila Candy Candy Crush Saga fotsiny ianao ary hiaina zavatra tsy mila.
Tsaroako fony aho mbola tanora (izany hoe teo anelanelan'ny folo taona lasa sy folo taona talohan'izay), ny filalaovana lalao video dia noheverina ho fomba fiasa am-behivavy fotsiny.
Azo antoka, ny namako avy tany am-pianarana dia niaiky fa nilalao ny fizarana manaraka an'ny The Sims, saingy matetika dia ampy izany - farafaharatsiny izany no noeritreretiko tamin'izany, satria tsy nanontany an'iza na iza momba ny safidiny lalao aho. Raha misy zazavavy amin'ny lalao an-tserasera - olona iray izay azo fantarina ho tovovavy (fantatrao hoe ahoana izany - dia nanisy marika zavatra sasany tao amin'ny "bang" aho indraindray, ka 88 taona aho avy any Canada), tsy mahazatra izany.
Hita anefa fa ny tsaho fa vehivavy dia vitsy an'isa vitsy an'isa amin'ny mpilalao dia fanambarana napetraka tamin'ny taona 80 na 90, izay nihataka hatrizay. Eny, betsaka kokoa ny mpilalao lahy, fa ny fahasamihafana dia tsy dia mafy loatra.
Ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny filalaovana dia tsy misy maridre akory - nohamafisin'ny fikarohana rehetra nandritra ny taona maro (sary: ​​Bruno Henrique, Pexels).
Milalao fahefana ireto vehivavy ireto
Statista, orinasa iray miatrika, inter alia, fikarohana an'ny mpanjifa, navoaka tao amin'ny statistikan'ny tranokalany izay mampiseho ny endrik'ilay fizarana lalao tany Etazonia, nopotehin'ny lahy sy ny vavy. Raha jerentsika ny sary tamin'ny 2006-2020 aseho amin'ny fandinihana dia miharihary ny fehin-kevitra - ny vehivavy vitsy an'isa amin'ity tranga ity dia tsy mazava fotsiny, fa koa mihombo hatrany amin'ny 40-45%. Tamin'ny taona voalanjalanja indrindra, 2014, ny tsy fitoviana ho an'ny lehilahy dia 52% ka hatramin'ny 48% ihany.
Amin'ny fanadihadiana iray hafa, nomanina efa ela be, tamin'ny 2012, nataon'ny studio Ipsos, afaka mahita antontan'isa ho an'ny firenena samy hafa miaraka amin'ny taonany sy ny fihenan'ny lahy sy ny vavy isika. Raha mijery an'i Polonina isika dia mahita fa amin'ny ankapobeny ny 55% amin'ny isan'ny lahy ary ny 43% amin'ny isan'ny vehivavy dia sendra nilalao. Raha jerena ny fizarazaran-taona dia somary feno fandaminana ny toe-draharaha ary, ohatra, ao amin'ny sokajin-taona 35-44, 51% ny lehilahy ary 48% ny vehivavy tsy maintsy niatrika lalao. Tena tsy mitondra fahasamihafana lehibe izany.
Amin'ny faran'ny 2014, mifandimby ny valin'ny fikarohana ambanin'ny tetikasa "Mpilalao aho" dia aseho (Ipsos dia nanana ny rantsantanany teto koa, ary izany dia isan'ny statistika mahaliana iray hafa. Mampiseho izany fa raha mpilalao ny vehivavy, 65% amin'izy ireo no milalao isan'andro, ary ny anaram-boninahitra ankafizin'izy ireo dia ny League of Legends, Assassin's Creed, The Witcher sy Diablo, noho izany dia tsy i Sims irery no miaina ny vehivavy.
Mpilalao - ny olon-drehetra, ratsy kokoa. Toy ny indraindray, indrisy fa afaka mahita ianao (sary: ​​Liza Summer, Pexels).
TSY Lalao mety io
Ity fandinihana taloha ity dia mampiseho fa ny filalaovan'ny vehivavy dia sady tsy tranga an-jorony, na koa vaovao, ary maro karazana tokoa. Ny fandalinana farany nahaliana izay nahasarika ny saiko, dia navoaka tamin'ny Desambra tamin'ny taon-dasa, ary natao izy ireo - tamin'ny anaran'ny Game Story - nataon'ny studio IQS.
Asehon'izy ireo fa ny 47% amin'ny isan'ny mpilalao poloney (9-55 taona) dia vehivavy, olona manodidina ny 8 tapitrisa, izay 2,3 tapitrisa amin'izy ireo dia milalao amin'ny solosaina na console isan'andro. Fa maninona no tadidiko ireo statistikan'ireo sy taloha? Satria vao tsy ela akory izay, tany amin'ny toerana nandalo azy, dia namaky hevitra iray aho fa zorony avokoa ity fikarohana ity ... mba hanozongozona ny latabatra, satria vehivavy maro no milalao Candy Crush Saga amin'ny telefaona findainy, ARY TSY GAME PRESENT JES PRESENT IZAO. Nahita fanehoan-kevitra mitovy amin'izany aho, na dia mazava ho azy aza fa tsy ny tsirairay, taorian'ny famoahana tamin'ny Desambra.
Eny, mbola tsy nandinika izay fandinihana natao ho mpilalao gamer aho ary milalao anaram-boninahitra tsy dia be pitsony noho ny The Witcher 3 amin'ny finday avo lenta ary tsy izany. Fa na 45 aza ny 47% no nivadika ny vokan'ny Candy Crush sy Angry Birds ... dia ahoana? Ary mitovy ihany - inona no hitranga raha toa ka mitendry anaram-boninahitra toa izany ny lehilahy ary manohy antsoina hoe mpilalao? Tsy misy mihitsy.
Leo ny manam-pahaizana toy izany aho ary milatsaka amin'ny toerako toy izany - tsy misy fitsaharana - tetika fiainana, izay milalao lalao. Tsy milaza aho fa tranga fahita matetika io, raha ny fahitako azy dia nanjary tsy dia zava-dehibe loatra izy io nandritra ny taona maro sy ny fiparitahan'ny lalao elektronika, saingy indraindray dia nahatsapa izany tamin'ny adihevitra an-tserasera.
Ny lalao dia tsy karazana zava-kanto miafina, noho izany dia tsy hitako izay antony tokony hiheverana azy io ho lalao mandroso fotsiny amin'ny haavo sarotra indrindra, ary ny fikorontanana alohan'ny hatory amin'ny 2048 dia tsy. Ny filalaovana lalao dia filalaovana lalao, ary mazava ho azy - feno nuansa io, satria ny zavatra iray dia ny fifaninanana CS misy vola be any aoriana, ary zavatra iray hafa ny lalao mini-tànana raha mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana (tsy mpanjaka) .
Veloma, raha nasiako ilay izy, hofafako ianao (sary: ​​Mart Production, Pexels).
Ratsy io na amin'ny fomba ahoana
Ny fahatsapana ny fisalasalana iray dia nateraka tsy tamin'ny filalaovana sendra fotsiny, fa koa amin'ny zavatra mifanohitra tanteraka - filalaovana hardcore, hoy ny olona. Na dia talanjona aza ny fihetsika toy ny hafainganam-pandehan'ilay Pac-Man na ny iray amin'ireo lalao taloha an'i Mario - fidirana mihidy ao amin'ny "Guinness Book of Records", maro ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafa, izay matetika mandeha ao amin'ny YouTube, no afaka manaitra hevitra momba ny hadalana tsy misy dikany toy izany miala voly.
Fa fahafinaretana inona - ny mihazakazaka ny endri-tsoratra amin'ny faran'ny sari-tany (na sarintany) ka hatrany amin'ny faran'ny iray hafa, fenoy ny zava-dehibe indrindra - ilaina tokoa ny mampita ny lohateny - asa ary tsy misy asitrika ao amin'ny lalao, na dia tsy misy aza. soritry ny fanitrihana, amin'ny famaranana lehibe? Ankoatr'izay, indraindray mampiasa glitches sy bug mba hanonerana ny sombin-javatra ...
Mitovy amin'ilay antsoina hoe powergaming, eto amin'ny resaka fanamafisana ny statistikan'ny toetranao. Ny fomba tsotra indrindra dia ny fampisehoana izany amin'ny ohatry ny RPG (Tsy te-hanoratra momba ny lalao iray aho izay manomboka amin'ny "G" ary mifarana amin'ny "othic", satria mankaleo ahy izany). Ao amin'ny RPGs, izay misokatra misimisy kokoa izao tontolo izao, misy NPC marobe ary maro ny azo atao mba hahazoana statistika amin'ireo monster izay manavao, azonao atao, amin'ny alàlan'ny filalaovana lava sy mafy loha, ny hahatonga ny maherifonao ho fitambaran'ny Pudzian sy Magneto.
Ampy ny mamafa ny zava-boary rehetra ambonin'ny tany - hatramin'ny kankana mandady eny ambonin'ny tany ka hatrany amin'ny dragona mitanjozotra eny amin'ny habakabaka, nefa tsy misy very na dia iray akory aza. Azonao atao ny mamono ny tanàna iray manontolo tsy misy fanamarinana foronina, azonao atao koa ny mivarotra zavatra amin'ny mpivarotra, mikapoka azy hatramin'ny fahatsiarovan-tena, mandroba ary mivarotra ny banga mitovy aminy ihany koa.
Misaotra an'io, ireo tondro toy ny tanjaka, mana, ary i Trygław sy i Swaróg dia mahalala izay hafa koa, mahatratra 100% izy ireo, ary ny toetrantsika dia coke mahery, mahery loatra mandritra ny fotoana iray ao anaty teti-dratsy. Eny, inona no azoko holazaina - amin'ireo olona sasany tsy dia ankasitrahana loatra ny filalaovana toy izany, satria manaisotra ny fahafinaretana amin'ny lalao ihany koa - ny fihazakazahana hanatsarana ny toetrany be loatra. Tsy milalao izany.
Manintona ahy indrindra io lafiny io, satria tiako ny totohondry 100% ny singa lalao isan-karazany - tsy voatery ho statistikan'ny toetrako akory aza, na dia hitako aza mahafa-po izany, fa ohatra ny karazana kolikoly na fikatsahana drafitra fahatelo azo havaozina. fotoana fohy. tena mifandraika, ary matetika tsy dia tian'ny olon-kafa (raha izany).
Rockstar, tsy hohadinoiko mihitsy ity sekoly manidina ity (sary: ​​s2art, CC BY-SA 2.0).
Taranaka AEZAKMI, eh
Misy zavatra iray hafa tadidiko hatramin'ny fahazazako sy ny fahazazako, satria niova kely ny fotoana, ary niteraka ny fisalasalana avy amin'ireo mpilalao fantatro. Ny momba ny fampiasana kaody hosoka ho an'ny lalao. Ary mazava ho azy - amin'ny lalao an-tserasera, ny fampiasana kaody hosoka hamitahana ny mpanohitra dia tsy azo ekena, satria voadona zavatra iray aho, araka ny hitako tao amin'ny mpizara CS 1.6 ilay lehilahy nilaza hoe "Rosiana ve izany?" avy eo dia nitifitra hazakazaka hafainganam-pandeha izy ary, nihazakazaka namakivaky ny sarintany tamin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana dia namono ny hafa toy ny kisoa.
Tsia, tsia, miresaka hampiasa cheats aho mba tena hilalaovana ilay lalao amin'ny mpitovo. Tadidiko avy tany amin'ny ambaratonga voalohany fa rugane amin'ny maha mpampinono tafahoatra azy, zavatra tsy ekena. Ka na dia nipetraka irery tamin'ny solosaina aza izahay, dia voninahitra ho anay ny miady, ary iraka sarotra manokana dia tsara kokoa ny manao in-30 misesy, mianiana toy ny mpandrafitra fa tsy manoratra kaody amin'ny godmode indray mandeha.
Rehefa somary antitra aho dia te hanao ireo iraka sarotra indrindra aza tsy misy mpanampy (sekolin'ny sidina San Andreas - ny halako anao), saingy vokatry ny hetahetako kely izany. Na dia kely fotsiny aza dia azoko nalefa fa tsy nanahirana, saingy androany dia mety tsy eo amin'ny rindrina intsony ity olana ity - toa tsy mitovy ny filalaovana kaody androany, raha toa ka manome safidy toy izany amin'ny lalao ny mpandrindra.
Milalaova araka ny itiavanao azy
Ireo ohatra rehetra ireo dia nanjary zavatra iray - ny sasany, vondron'olona madinidinika dia mihevitra ny fomba filalaon'izy ireo no tsara indrindra, mahay mandanjalanja indrindra ary mahafa-po indrindra, fa ny fomba hafa kosa dia fanehoan-kevitra mahamenatra. Ary raha ny fahitako azy dia fahadisoana lehibe ny fisainana toy izany - etsy an-daniny, miezaha tsy "miditra" amin'ny toeranao, etsy ankilany, aza mihaino ny resaka bitika toy izany.
Raha tsy eo amin'ny kiraron'ny hafa isika dia tsy hahita izay manome azy ireo ny tena fifaliana amin'ny filalaovana. Ilaina ve ny miala sasatra sy manapaka, milalao haingana ny lalao nefa tsy misy olana, na dia amin'ireo kaody aza? Moa ve mampitombo ny tarehin-tsoratra, manatratra fatratra na dia ireo zava-bitany kely indrindra aza, na manohitra ny tenanao amin'ireo fanamby hafainganana? Angamba misy maniry hahatsapa ho anisan'ny vondrom-piarahamonina filalaovana amin'ny filalaovana lalao finday tsotra? Fa maninona no hosakanantsika ny olona toy izany?
Araka ny filazan'ny Sinoa azy - iza no mahalala? Milalaova araka izay itiavanao azy, raha mbola mahatsapa fahafaham-po ianao aorian'ny famonoana ny solosainao, ny console sy ny smartphone-nao. Fantatro fa ambany eritreritra io amin'ny farany, saingy natao ho an'ny vahoaka izany rehetra izany - toy ny zava-mahadomelina mahery "voay" avy any Russia
Mazava ho azy fa vazivazy, zava-mahadomelina mafy fotsiny amin'ny lalao. Handeha hilalao GTA aho, angamba mety soratako AEZAKMI amin'ny klaviko aza.